Ubuntu 18.x ama ka sareeya: xalka hadii isku darka Alt + Imp Pant + REISUB uusan kuu shaqeynaynin | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waad ogtahay in kastoo Ubuntu waa dhagax adag, marwalba nacas ma aha. Mararka qaarkood, codsi ama bug ayaa laga yaabaa inay laalaadaan nidaamka oo aan kuu oggolaan doonin inaad bilowdo qalabka si aad u sameyso wax hawl ah ama aad dib ugu bilowdo kombiyuutarka, iwm Xaaladahaas aadka u daran ee aanad wax soo saar kale lahayn, halkii aad ka damin lahayd qalabka adoo riixaya oo haysta badhanka furaha / dabka ama badhanka dib u dajinta, waxaad haysataa ikhtiyaar kale.
Ikhtiyaarkan ayaa ah in la riixo furayaasha isku dhafan sida ay yihiin Shaashadda Alt + Print + REISUB. Taasi waxay ka dhigeysaa nidaamka mid jawaab celin ah iyo dib u soo kabasho si ay uga soo baxaan gobolkaas qabow. Xusuusnow waa inaad hoos u dhigtaa furayaasha shaashadda Alt + Print ka dibna waxaad riixi kartaa furayaasha soo socda midba mid adigoon haysan inaad dhammaantood isku mar wada qabato (sida iska cad): R, E, I, S, U, and B. Dhibaatadu waxay tahay in laga yaabo inaysan ku shaqeyn nooc ka mid ah Ubuntu ...
Waxa ay shaqadani qabato waxay dhaqaajisaa a SysReq (Nidaamka Codsiga) ama codsi ku saabsan nidaamka si kernelku uga jawaabo codsigaas, kiiskanna, dib u bilaabo nidaamka qaboojiyay. Furayaasha waxaa loo isticmaalay:
J: Ku soocelinta xakamaynta kiiboodhka ama unRaw.
E: Jooji dhammaan howlaha ama tErm.
Aniga: waxaan dilaa habsami usocodka nolosha ama fullkIll.
S: Isku duwo cajalladaha ama Nidaamka.
U - Ku dhaji dhammaan nidaamyada faylalka sida akhris-keliya ama Umount.
B: dib u bilaw kumbuyuutarka ama reBoot.
Haddii noocaaga nidaamku naafo yahay, waxaa si fudud lagu hagaajin karaa. Wixii dhaqaajiso oo nidaamku wuxuu xaadiraa taxanaha raacaya Alt + Imp Pant si ay u qabtaan shaqooyin kala duwan (maadaama ay jiraan in ka badan kuwan aan soo muujiyay), waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo amarka soo socda ee yeelan lahaa saameyn isku mid ah:
Xusuusnow in awaamiirtii hore aad ubaahantahay mudnaan, sidaa darteed ku doorbide sudo ama, ku guuldareysiga taas, asal ahaan.
Hadda wixii ka dambeeya, iskudhafka muhiimka ah waa inuu shaqeeyaa ... Xusuusnow haddii aad ku badasho feylka / proc / sys / kernel / sysrq, way shaqeyn doontaa, laakiin ma badbaadi doonto markaad dib u bilowdo nidaamka, markaa waxaad yeelan doontaa in mar kale la beddelo. Taasi waa, maahan mid joogto ah.
Inbadan oo ku saabsan sixirka SysRq
Waxa kaliya ee aad ku sameysay amarka aaladda hore waa inaad bedesho qaabeynta kernel si aad ugu dejiso qiime 1 kaas oo awood u siinaya dhammaan howlaha SysRq. Laakiin waa inaad ogaataa inay jirto qiyamka kale ee suurtogalka ah, haddii ay dhacdo inaad xiiseyneyso isticmaalkooda:
0 - Gabi ahaanba ka dhig SysRq.
1 - Sahlo dhamaan sifooyinka SysRq.
> 1: maaskaro yar si loogu oggolaado shaqooyinka qaarkood:
2: wuxuu awood u siinayaa kontoroolka konsoleolka heerka log.
4: awood u yeelo xakamaynta kumbuyuutarka (SAK, unraw)
8 - In loo sahlo qashin-saarka qashin-saarka, iwm.
16: awood u yeelo amarka isku xidhka.
32: wuxuu awood u siinayaa in la iska iibiyo qaab kaliya oo la aqrin karo
64: awood u yeelo tilmaamidda habka (muddada, dil, oom-dil)
128: u oggolow reboot / poweroff.
176 - Kuu ogolaanayaa isku xirnaanta oo keliya, dib u bilowga, iyo ka-noqoshada qaab akhrin-keliya.
256: waxay u oggolaaneysaa in la ogaado dhammaan howlaha RT
Taasi waxay tidhi, sidoo kale waxaa jira furayaal kale sixir aan ahayn R, E, S, I, U, B, oo aad u adeegsan karto inaad ku samayso codsiyo gaar ah nidaamka qalliinka. Waxaa loo isticmaali karaa isku xigxiga sida RESIUB, laakiin sidoo kale waa la go'doomiyey, sida Alt + Screenprint + S, Alt + Screenprint + B, iwm. Oo si aad u ogaatid fursado badan, halkan waxaa ku yaal liis:
B: rebootka kombiyuutarka si amaan daro ah. Taasi waa, iyada oo aan la iswaafajineynin bakhaarada diskiga, ama la furayo qoruhu. Tani waxay sababi kartaa in xogta la waayo ama qaar xilligaa la qorayay la musuq-maasuqo. Waxay la mid tahay adigoo riixaya badhanka dib-u-dejinta jirka ama riixaya badhanka ON / OFF ee qalabka kale ee la qaadan karo ama AIO.
C: wuxuu qasbaa shil, wuxuu ku tuurayaa xasuusta nidaamka ugu weyn diskiga.
D: wuxuu kori doonaa qufulka nidaamka.
E: waxay u dirtaa calaamadda SIGTERM dhammaan howlaha marka laga reebo init / systemd / upstart,… Taasi waa, waxay dishaa dhammaan howlaha socda marka laga reebo midkaas.
F: wuxuu codsanayaa Dilalka OOM, si loo xalliyo kiisaska qaarkood markii nidaamku xusuusta ka baxo.
G: gali qaabka khaladka qunsuliyada, adoo adeegsanaya shaashadda.
H: waxay ku tusi doontaa caawimaadda isticmaalka SysRq.
J: waxay ku qasbeysaa inay xayiraan nidaamyada faylasha ama nidaamyada faylalka iyagoo adeegsanaya FIFREEZE.
K: dil dhamaan howlaha qunsulka aad isticmaaleyso. Taasi sidoo kale waxaa ku jira garaafka.
L: waxay muujineysaa dib-u-soo-celin ballaaran oo dhammaan CPU-yada firfircoon ee nidaamka. Haddii ay jiraan wax firfircoon ama gacanta naafo ah, ma muujin doono wax iyaga ku saabsan.
M: waxay ku tusaysaa macluumaadka xusuustaada.
N: dib udajinta ciladaha fiicnaanta dhammaan mudnaanta sare iyo geedi socodka RealTime. Taasi waxay yareyn doontaa dhibaatooyinka isku haysta kheyraadka.
Ama: waxay gebi ahaanba xiri doontaa kumbuyuutarka. Taasi waa, ugama dhigayso sidii hakad oo kale.
P: show diiwaanka iyo calamada.
S: muuji dhammaan saacadaha firfircoon iyo ilaha saacadda.
J: Ka beddel qaabka kiiboodhka RAW illaa XLATE.
S: waxay iswaafajin doontaa bakhaarada diskiga ama saxannada, taas oo ah, xusuusta kaydisa hawlgallada marin u helka in la sameeyo. Marka xogtaadu ma xumaaneyso haddii aad ka saarto gaariga ama aad dib u bilowdo si lama filaan ah.
T: wuxuu muujiyaa liiska shaqooyinka.
U: u beddelo qaabka isugeynta ee qormooyin u aqrin-keliya ama akhrin-keliya.
V: ku qasbo dib u dejinta qunsuliyadaha shaashadda.
W: wuxuu ku tusayaa liistada howlaha la xannibay.
Booska bannaan: wuxuu ku tusi doonaa furayaasha sixirka SysRq laga heli karo kombuyuutarkaaga.
Xusuusnow in kuwan oo dhan aysan ku shaqeyn doonin dhammaan noocyada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ubuntu 18.x ama ka sareeya: xalka hadii isku darka Alt + Imp Pant + REISUB uusan kuu shaqeynaynin
Waxaa jira qalad:
Maahan RESIUB ee waa REISUB.
Waxaan isticmaalay qaaciddada Alt + Print Screen + REISUB, laakiin isla shaashadda ayaa mar kale soo muuqata: waxay la mid tahay terminal amarro isdaba joog ah leh. Waxay soo muuqdeen kadib markaan cusbooneysiiyay ubuntu 18.04. Waa shaashad aan dhaqaaqi karin. Iima oggolaaneyso inaan wax qoro, mana heli karo shaashadda guriga.
Ma aqaan wax aan sameeyo.
Facebook wuxuu ixtiraamayaa go'aankaaga ah inaan lala wadaagin goobtaada, laakiin wuxuu dib u soo celinayaa awoodiisa wuxuuna sii wadaa inuu kula socdo
Qiyaastii 267 milyan oo isticmaale Facebook ah ayaa waxaa saameeyey jebinta xogta